Hackathon aorian’ny krizy: Niray hina hanomana tontolo aorian’ny COVID-19 ny FTMF Ekoadaoreana · Global Voices teny Malagasy
550 eo-ho-eo no nisoratra anarana ary hevitra miisa 16 no nahazo fanohanana
Voadika ny 03 Septambra 2020 6:37 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Esperanto , русский, Português, Español
Hackathon. Sary avy amin'i Andrew Eland/Flickr, nampiasana lisansa CC BY-SA 2.0.
Navoaka voalohany tao amin'ny tranonkala Ekoadaoreana Ojo al Dato (Topimaso amin'ny angondrakitra) ity tantara ity ary navoakan'ny Global Voices indray avy eo rehefa avy nasiam-panovana. Ireto ny lahatsoratra voalohany sy faharoa amin'ny andiany ôrizinaly.
Firenena maro no nanomboka tsimoramora niala tamin'ny fihibohana ary voatery hiatrika ny zava-misy sarotra amin'ny tontolo anjakan'ny COVID-19. Tao Ekoadaoro, firenena iray lasibatry ny coronavirus tanteraka, nikarakara hackathon ny FTMF tamin'ny volana Aprily mba hanangonana hevitra momba ny tetikasa hamahana ny sasany amin'ireo zava-misy ireo. Tamin'ny 30 Mey no nambara tamin'ny alàlan'ny fandaharana mivantana tamin'ny YouTube ireo mpandresy, nitondra ny fampahafantarana ampahibemaso ary koa ny fanomezan-doka ho an'ireo tetikasa mahomby.
Fampandraisana anjara ny besinimaro amin'ny ady amin'ny coronavirus
Tamin'ny faran'ny volana Aprily i Ekoadaoro no nitana ny laharana fahatelo tamin'ny isan'ny tranga tany Amerika Latina; ary olona miisa 3.642 no maty araka ny tarehimarika ofisialy tamin'ny fotoana nanoratana.
Sary rakotra, sary avy amin'i Estéfano Dávila, azo ampiasain'ny fampitam-baovao maimaimpoana.
Olona miisa 549 no nanatrika ny Hackathon Aorian'ny Krizy, izay natao ny 29-30 Aprily, ary nanao vakijejy nitady vahaolana izay mety hisy fiantraikany amin'ny toekarena sy ny fiarahamonina ao Ekoadaoro aorian'ny COVID. Sehatra iaraha-miasa ny Hackathons hitadiavana vahaolana amin'ny fanamby manokana ary ity iray ity dia nifantoka tamin'ny fanamby mifandraika amin'ny sehatra miisa folo: ny tontolo iainana, ny asa, ny fiainana andavanandro, ny fomba fanao ara-tsosialy, ny indositirian'ny kolontsaina, ny fanabeazana, ny fahasalamana sy ny mahasoa, ny toekarena sy ny famokarana ary ny governemanta sy ny mahaolom-pirenena .
Nokarakarain'ilay mpamolavola sady mpahay fiarahamonina Iván Terceros ny hetsika, niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy avy ao amin'ny MediaLab (mifandray amin'ny FTMF CIESPAL) ary ireo fikambanana sy tambajotram-barotra isankarazany koa. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'i Ojo al Dato, niresaka ny antony nampazoto hanao ny hetsika i Terceros:
Tsy mbola fantatra izay hitranga ny ampitson'ny krizy […] Mety ireo no fotoana ho tena sarotra indrindra [ho an'ny fiarahamonina].
Tetikasa hackathon ho an'ny fanovana
Nizara tetikasa miisa 116 ny mpandray anjara ary nanampy tamin'ny fisafidianana ireo mpifaninana tafakatra famaranana miisa 19 ireo fikambanana nandray anjara tamin'ny Hackathon.
Anankiroa ny fifidianana: ny iray avy amin'ny daholobe- izay nifidy ny WiyaPoint sy ChasquiCheck ho mpandresy tamin'ny safidin'ny daholobe – ary ny iray avy amin'ny mpitsara. Saika nahazo loka avokoa ny mpifaninana tafakatra famaranana rehetra.
Mamaha ny olana amin'ny fampiasana harona plastika – fitaovana hifindran'ny COVID-19 – ny fampiasa finday WiyaPoint amin'ny alàlan'ny fanomezana valisoa ny mpisera isaka ny mandà handray harona plastika izy ireo rehefa mividy zavatra. Miezaka ny hamaha ny olana momba ny vaovao diso manodidina ny COVID-19 ny ChasquiCheck amin'ny alàlan'ny fananganana ny sehatra dizitaly hanamarinana, hamantarana ary hanasokajiana ireo vaovao iadiana amin'ny vaovao diso.
Hahazo dokambarotra, fanombohana fanentanana, ary dokambarotra amin'ny tambajotra sosialy mitentina 1.000$ avy amin'ny sehatra fanangonam-bola ifarimbonana Green Crowds ny fampiasa WiyaPoint. Hahazo fanampiana mitovy amin'izany ihany koa ny ChasquiCheck hanombohana ny sehatra virtoaly, noho ny fikambanan'ny matihanina mitantana ny voina any Ekoadaoro.
Tetikasa miisa efatra ambin'ny folo hafa no nahazo karazana loka tamin'ny vaton'ny mpitsara. Ohatra, nandinika momba ny zaridaina mahavita mamelo-tena irery ho vahaolana amin'ny tsy fahampian-tsakafo vokatry ny valan'aretina ny mpandray anjara. Samy hanome azy ireo torohevitra ara-teknika mitentina 1.000$ ny Grupo Faro sy Incubadora La Libertad.
Todos Más Cerca dia sehatra dizitaly mampifandray ireo orinasa madinika sy salantsalany hanampiana azy ireo hamerina iray ny toekareny. Amin'ny alàlan'ny sehatra no ahafahan'ny orinasa manolotra ny vokatr'izy ireo ho an'ireo mpisera izay akaiky ara-jeografia; ny hisorohana ny fampivondronana izay mety hampitombo ny isan'ny fifindran'ny COVID-19 no tanjona. Efa manana fifanarahana amin'ny Antenimieran'ny Varotra any amin'ny faritra sasany any Ekoadaoro, toa an'i Zamora, Loja, Cuenca, ankoatra ireo sasany hafa ny Todos Más Cerca.
Hahazo famatsiam-bola mitentina 3 000 $ avy amin'ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana Momba ny Fampandrosoana (PNUD) sy ny La Libertad Incubator ihany koa ilay tetikasa. Hanome azy ireo fiaraha-miasa, torohevitra ary fampianarana ny sampan-draharaha fampiroboroboana ara-toekarena Conquito.
Momba an'i Ekoadaoro, nanazava i Terceros fa hanohy hanohana ireo tetikasa izay efa nomena aina ny MediaLab, ​​mba ahafahany mikotrika ho toy ny start-ups mandritra ny taona.